mitauro yenyika dzeGerman haitauri kumusha
Muchidzidzo ichi cheGerman; Isu tichapa ruzivo nezve nyika dzeGerman, mitauro yeGerman uye nyika dzeGerman. Chidzidzo chenyika dzeGerman nemitauro zvinowanzo dzidziswa mugiredhi re9 munyika medu.
Muchidzidzo ichi, kwatinozoongorora chiGerman chenyika, ngatitangei kuona chiGerman neTurkey chenyika imwe chete nezviratidzo zvatakakugadzirira. Chekutanga pane zvese, isu tichaona mazita enyika dzatinonzwa zvakanyanya uye anowanzo kuve muEuropean kondinendi, rimwe nerimwe, nezviratidzo. Gare gare, isu tichaona mazita eedzimwe nyika zhinji mutafura, tidzidze mazita erudzi rweGerman uye tidzidze mitauro inotaurwa nenyika dzeGerman.
Tinokurudzira kuti iwe utevere chidzidzo chedu zvakanyatsonaka. Iye zvino ngatione nyika dzeGerman nemifananidzo. Zvino, ngatibatei pane inotevera nyaya: Unogona kuona chinyorwa pamberi pezita renyika mune mamwe emifananidzo pazasi. Kunyangwe mazita emunyika yeGerman achiwanzo asina zvinyorwa, dzimwe nyika senge die Türkei ane zvinyorwa pamberi pavo. Iyi nyaya inofanirwawo kutariswa.
Kana iwe ukatarisa pamifananidzo pazasi, iwe unogona zvakare kudzidza nezve zvinotevera:
Takaratidza mazita emunyika yeGerman
Pamusoro pemazita emunyika yeGerman, takaratidza zvadzinoreva muchiTurkey.
Isu takaratidzawo mepu dzenyika dzeGerman
Pamusoro penyika dzeGerman, isu takaratidzawo mureza mavara eidzi nyika pamepu.
Nyika dzeGerman Dzakaratidzwa Lecture
Griechenland - GIRISI
Mukume - POLAND
Pamusoro, takaona mazita echiGerman edzimwe nyika uye zvakaenzana neTurkey pamwe chete nemamepu enyika uye nemirairi mavara. Ngatione dzimwe nyika. Mune runyorwa rwatakaronga setafura pazasi, iwe uchaona nyika nemitauro yeGerman nemazita akapihwa kumarudzi enyika idzi. Tsananguro yetafura inowanikwa pazasi chete.
Nyika dzeGerman, mitauro yeGerman uye nyika dzeGerman
Chekutanga pane zvese, ngatipei yakajairika. Imwe yenyaya dzatakafukidza kare Zvigadzirwa zveGerman kuti nhengo yega yega inyanzvi yakatumidzwa zvakasiyana kune murume nemukadzi muchiGerman, ari kuti chinyorwa chiri pakutanga kwezita rehunyanzvi remukadzi ari Takati pane chinyorwa. Saka kana mudzidzisi ari murume, rimwe izwi rinotaurwa muchiGerman, uye rimwe izwi rinotaurwa kana riri mukadzi. Uye zvakare, der artikeli inoshandiswa pamberi pevarume uye die articel inoshandiswa pamberi pevakadzi.
Kungofanana neizvi, mazita erudzi rweGerman anodomwa zvakasiyana kune varume nevakadzi, uye ari chinyorwa, kana pamberi pevakadzi ari Chinyorwa chinoshandiswa. Mushure mekuongorora tafura yenyika dzeGerman, nyika dzeGerman nemitauro pazasi, tsananguro inodiwa inowanikwa pasi petafura.
NYIKA DZEJEREMAN - RUDZI - MITAURO
Nyika (Nyika) kufa Nationalität (RUDZIMA) kufa Sprache (LANGUAGE)
kufa Turkei Turkey / Turkin Turkish
Nordzypern Turkey / Turkin Turkish
Syrian Syrier / Syrierin Arabic
taura Iraq Iraker / Irakerin Arabic
kubva Iran Iraner / Iranerin ChiPersian
Japani Japanese / Japanese ChiJapanese
Russia Russe / Russin ChiRussian
Patafura iri pamusoro, chikamu chekutanga chine zita renyika, chikamu chechipiri rudzi rwevanhu vanogara munyika ino, uye chikamu chechitatu chine mutauro unotaurwa munyika muno.
semuenzaniso kufa Turkei Mutsara weTurkey unoreva. Turkey kuti kutaura (kana kuti zvanzi Türke) zvinoreva murume wechiTurkey, kufa Turkin zvinoreva mukadzi weTurkey. Turkish Mutsara unoreva mutauro weTurkey unotaurwa muTurkey.
E.g, Russia zvinoreva Russia, anodaro Russe izwi iri rinoreva VaRussian, kufa russin kutaura zvinoreva mukadzi wechiRussia. Kana iwe usingakwanise kunzwisisa zvinorehwa nedzimwe nyika, zvinobatsira zvikuru kwauri kuti udzidze kubva muduramazwi. Kazhinji yenguva, hatinyore chirevo cheTurkey chezwi rega reGerman, kuti iwe utarise kumusoro mazwi kubva muduramazwi kuti udzidze chirevo cheGerman. Mashoko akadzidziswa muduramazwi anonyanya kubata.
Iwe unogona kuona dzimwe nyika, nyika nemitauro mumifananidzo yatakugadzirira pazasi.
Mitsara pamusoro penyika nenyika munyika dzeGerman
Zvino, isu tichazosanganisira zvirevo zvemuenzaniso pamusoro penyika, nyika nemitauro inotaurwa muchiGerman. Pamhando idzi dzemitsara, isu tichataura mamwe emitsara inozivikanwa kwazvo yatinonzwa tese tichidzidza chiGerman uye ari mamwe ezvidzidzo zvekutanga zvinoratidzwa muzvikoro. Iyi mitsara inotevera:
Uri kubva kupi?
Unotaura mutauro upi?
Mitsara yakafanana. Ngatipe mienzaniso yemitsara yakadaro.
Wo wohnst du? Mutongo uye mhinduro yekupindura mitsara
Wo wohnst du? (Unogara kupi?)
Ich wohne muBalıkesir Ndiri kugara muBalıkesir
Du wohnst muBursa Iwe unogara muBursa
Akadaro wohnt muAntalya Akadaro anogara kuAntalya
Wir wohnen muArtvin Tinogara kuArtvin
Woher kommst du? Mutongo uye mhinduro yekupindura mitsara
Woher kommst du? (Uri kubva kupi?)
Ich komme aus Balikesir Ini ndinobva kuBalıkesir
Du kommst aus Marmaris Unobva kuMarmaris
Hamza kommt aus Izmir Hamza anobva kuIzmir
Wir kommen aus sinop Isu tinobva kuSinop
Was sprichst du? Mutongo uye mhinduro yekupindura mitsara
Was sprichst du? (Unotaura mutauro upi?)
Ich spreche russicsch Ndiri kutaura russian
Du sprichst Deutsch Unotaura chiGerman
Meryem spricht Englisch Meryem anotaura Turkish
Wie sprechen Shona und Türkisch Isu tinotaura Chirungu neTurkey
Nyika yeGerman Kutaura Kutaura
Nyika dzeGerman Nyika neMitauro Yekudzidzira Chirevo
Pazasi, shamwari yedu inonzi Dora inopa ruzivo nezvake. Uchishandisa ruzivo rwako rweGerman, tsvaga mazwi anofanirwa kunge ari munzvimbo dzemutsara pazasi.
………… Tag! …… Zita ………. Dora.
Ich …………. muParis.
ich ……. Englisch uye Turkisch.